အမှန်မပြနိုင်သောကြည့်မှန်တစ်ချပ်အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အမှန်မပြနိုင်သောကြည့်မှန်တစ်ချပ်အကြောင်း
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Dec 30, 2010 in News | 15 comments
လုံးဝမှားနေပြီ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်လေးရှိနေပါသေးတယ် အချိန်လေးပေးနိုင်ပါသေးတယ် တစ်ကယ်ပါ ကိုယ်မညာပါဘူး ဝိုင်းဝန်းပြောပေးကြပါဦးလား သူ့ ကိုယ်သူ အမှန်တရားတဲ့ အမှန်ကမှားနေတယ်ပြောရင်လက္ခံနိုင်ကြပါမည်လား ဖြစ်ပံ
သူ့ ကိုယ်သူ အမှန်တရားတဲ့
တစ်နေ့ မှာပေါ့ ရခဲ့တဲ့ကြည့်မှန်တစ်ချပ်
ကြည့်မှန်ရှေ့ မှာ မတ်မတ်ရပ်နေတာက ကျွန်ုပ်လေ
ကျွန်ုပ်က ကျွန်ုပ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေလေရဲ့ 
ကြားလို့ မှ ကောင်းကြသေးရဲ့ လား
၀မ်းချူတာ မခက်ပါ.. ဆေးဆိုင်ကိုသွား.. ၀မ်းချူ ဘောလုံး ၀ယ်လိုက်ပါ.. ၀မ်းချူဘောလုံးက ထိပ်ဘက်မှာ အချွှန်လေးပါတယ် အဲဒါလေးကို ဖြတ်လိုက်ပါ.. ပြီးလျှင် စအိုထဲကို အချွှန်လေးကို ထည့်.. ဘူးလေးကို ညှစ်လိုက်ပါ.. အရည်တွေ ကိုယ်ထဲကို ၀င်သွားချိန်မှာ ဘူးလေးကို ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ ပိတ်ထားပါ တတ်နိုင်သလောက် အချိန် ယူပြီး အောင့်ထားပါ။ ကြာကြာ အောင့်ထားနိုင်လျှင် ကောင်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်.. ဘူးထဲမှ အရည်များက စမြင်းတုံး အကျစ်အခဲများကို ပျော့ပြောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ မအောင့်နိုင်အောင် ပါချင်ပြီဆိုလျှင် ပါလိုက်ပါ.. အဆင်ပြေသွားပါမည်။ အကြောသိပ်တင်းသူများ.. ၂ဘူး ၃ဘူး အထိထည့်လို့ရသည်။
အွန်လိုင်းတက် ပြီး လာချုပ်ပြနေပါလား
ဒေါက်တာချက်ကြီး သိရင် နာဦးမယ်နော်..
ဆူး ပြောတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ၀မ်းချူဘောလုံးငါးလုံးလောက်ထည့်လို့ဝမ်းမသွားတဲ့စမြင်းသမားတွေရှိပါတယ်။အဲလိုလူမျိုးတွေအတွက် သွားဖွားခန်းကသူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်လောက်ကိုအကူအညီတောင်းပါ။ ၀မ်းချူအိုးကြီးထဲကို ရွှေဝါဆပ်ပြာ တုံးကိုရေနဲ့ဖျော်ပြီး ဂလူးကို့စ် သွင်းသလို စအိုထဲကိုပိုက်နဲ့ တပ်ပြီး အပေါ်က ကတော့နဲ့လောင်းထည့်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ကိုယ်တွေ့ပါ။ သုံးကြည့်လိုက်ပါဦး။
နာတိတယ်.. ကြောမကောင်းလို့.. နာတိတာတော့ ရွှေဝါ မဟုတ်ဘူး.. Elan ပြစ်ပြစ်လေး..အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာ ၀ယ်လို့ရတယ် သံဗုံး ကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ပိုက်ကလေးတပ်ထားတဲ့ ဟာလေ.. အဲဒီ ပိုက်ကလေးကတော့ ပျော့ပျော့လေး ရာဘာ ပိုက်.. သူကို အတွင်းကို ၀င်အောင် ၂ပေလောက် သွင်းပလိုက်တာ.. ပြီးတော့.. ဆပ်ပြာရည် ရှိတဲ့ သံဗုံးကလေးကို မလိုက်တော့.. ရေက အထက်ကနေ အောက်ကို ဆင်းတော့ ပိုက်ကနေ တန်းနေတာဘဲ ၀င်သွားတာ အဲဒီမှာ မနေနိုင်ဘူး.. ပါချင်လာကော.. အချင်မပြေရင် လက်အိတ်လေးဝတ်ပြီး နှိုက်ထုတ်တာ.. ဘူးစွပ် တွေ ထွက်သွားရင်.. နောက်ပိုင်းက ချောချောချူချူ ထွက်လာလိမ့်မယ်..
ခုမှပဲ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖူးတဲ့ လူတွေ ရဲ့ အတွေ့ အကြုံရင့် စကားတွေ ကို ကြားရတော့ တယ်ဗျာ…
နာတော့ ချူထုတ်ရလောက်အောင်တော့ ကျန်းမာရေး မချူချာဘူးဘူးနော်.. တညိုးထင်ခံရမှာ ချိုးလို့..
မမဆူး ( . အချင်မပြေရင် လက်အိတ်လေးဝတ်ပြီး နှိုက်ထုတ်တာ.. ဘူးစွပ် တွေ ထွက်သွားရင်.. နောက်ပိုင်းက ချောချောချူချူ ထွက်လာလိမ့်မယ်.. ) ကတော့ အစွပ်ကအထဲဝင်သွားလို့လား … ဘူးစွပ်ဆိုတာဘာလဲ … မသိလို့နော် . . .
ဟိုနေ့က ဒီ post ကိုဝင်ကြည့်ပြီးသွားပြီ ၀မ်းချုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် နည်းလမ်းကောင်းရှိ၇င်ပေးပါဆိုပြီးတင်ထားတာ အခုပြန်ဝင်ကြည့်တော့မှန်အကြောင်းဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလဲနားမလည်တော့နော် အုန်းစားအောင် မလုပ်ကြနဲ့
သြော်.. အဲ့ဂလိုလား… တိဘူး.. နာက နီတို့တတွေ မှန်ကြည့်လိုက် ဝမ်းချူလိုက်နဲ့ ဘာလုပ်နေပါလိမ့်လို့.. ဘာမှန်းမတိသေးလို့ ဝင်မရေးပဲ ဘေးကနေကြည့်နေတာ အထုမှရှင်းသွားတော့တယ်… ဒါ ကိုခိုင်တို့အပြစ်.. ကိုခိုင်တို့အဖွဲ့သားတွေကို မှန်ကြည့်ပီး အင်အင်းပါ ခိုင်းရမယ်…
ဩော်….လက်စသပ်တော့ မှန်ကြည့်ပြီး အီအီးပါနေကြတာကိုး…..
ကိုအောင်ပုကြည့်ရတာ အခုတလော တရားတွေ တော်တော်ကျနေပုံရတယ် ….
ဘုဘုတို့ တရားကျနေတာက ပြန်တောင်မကောက်နိုင်ဘူးတဲ့လေ